Malunga nePerseid Meteor Shower
I-Perseid meteor shower isinye semvula eyaziwayo kakhulu ngonyaka. Ingenye yeziganeko ezinkulu zeenkwenkwezi zeNorthern Hemisphere ehlobo kunye ne-Southern Inteliti yebusika ebusika. Iqala ngasekupheleni kukaJulayi kwaye iqhubela ngaphaya kwe-Agasti, ihamba nge-Agasti 11 okanye nge-12. Xa izimo zilungile, unokukwazi ukubona ezininzi zeemeteors ngeyure. Konke kuxhomekeke kwimozulu kwaye yiyiphi inxalenye yomlambo weMeteor uhamba ngomnyaka ngamnye.
Kwakhona, ukubukeka kukuhle xa kungabikho ukuphazamiseka kwiNyanga, nangona unako ukubona ama-meteors acacileyo njengoko ekhanya ngezulu. Kulo nyaka (2017) ukuphakama kwentlanzi kwenzeka kungekudala emva kwenyanga egcweleyo, ngoko ukukhanya kwayo kuya kuhlamba umbono we-dimmer meteors. Ngokuqinisekileyo uya kubona abambalwa abaqaqambileyo ngeli xesha, kodwa ungathengi kwi-hype "ngeyona nto ibhetele," ebanzi. I-hype kwaye mhlawumbi iqhosha. Ngaba ukujonga kwakho kuxhotywe ngokulindelekileyo kwaye uya kuvuzwa (ngaphandle kokuba ifuba).
Yintoni Ebangelwa Ngama-Perseids?
I-Perseid meteor shower is real material left behind by Comet Swift-Tuttle. Iyadlula kwi-system yethu yehlabathi yonke iminyaka engama-133. Njengoko ihamba, le ntshukumo yebhola ebomvu iyashiya emva kweengqolowa ezincinci zeqhwa, uthuli, idwala, kunye nezinye iindawo eziqhekezayo, ezifana nomninimzi onenkathazo ochitha i-debris kwimoto. Njengoko umhlaba uhamba ujikeleze i-Sun, udlulela kule ntsimi ye-debris ngezinye iziphumo eziphawulekayo, esiziyo njengePerseids.
Njengoko uMhlaba uhamba ngomlambo-onokulula kwi-14 yezigidi ukuya kwiikhilomitha ezili-120 zeekhilomitha kwi-interlanetary space-ukukhulula kwawo kudibanisa kunye neengqungquthela kwaye kusasaza umlambo. Njengoko i-comet iyadlula, ikhupha iintlobo zeengqungquthela ezintsha, zihlaziye rhoqo ukunikezelwa kwezinto eziza kugqitywa ne-atmosphere emoyeni.
Umlambo uguquka rhoqo, kwaye oku kuyachaphazela imicimbi ye-Perseid meteor shower events. Ngamanye amaxesha uMhlaba udlula kwiindawo ezininzi ezinqabileyo zomlambo, kwaye oku kubangela ukugeleza kwemvula enkulu. Ngamanye amaxesha, iwela inxalenye encinci yomlambo, kwaye asiboni amaninzi amaninzi.
Nangona kukho amaninzi emvula yamanzi ngonyaka, njengamaLeonids, amaLyrids kunye neeGeminids, ukubiza ezimbalwa, isitya sePerseid sinokuthenjwa, kwaye sinokumangalisa ukuba imeko ilungile. Indlela ebukeka ngayo ixhomekeka kwizinto ezininzi-ukusuka ekubeni iNyanga ifuphi (kunye neqaqambile ngokwaneleyo ukuhlamba umbono) - yiyiphi inxalenye yokuhlangana komhlaba emhlabeni. Umlambo awuhambelananga ngokukodwa kunye neengqungquthela, ngoko ke eminye iminyaka ukubonelelwa kwezixhobo kunokuba kube ngaphantsi kwamanye. Kunyaka nawuphi na unyaka, ababukeli babona naphi na ukuya kuma-50 ukuya kwi-150 abaxhasi ngeyure ngokomyinge, ukwanda ngamanye amaxesha ukuya kwi-400 ukuya ku-1 000 ngeyure.
I-Perseid meteor shower, efana neminye imvula yamanzi , ibizwa ngokuba yi-constellation apho ibonakala ibonakala khona: I- Perseus (egama libizwa ngeqhawe lamaGrike eliyingqungquthela) elikufutshane neCassiopeia, uKumkanikazi. Oku kubizwa ngokuba "okukhazimulayo", kuba oko kukukhokelo lwabantu ababonakalayo behamba ukusuka njengoko bajikeleza esibhakabhakeni.
Ndiyijonga njani i-Perseid Meteor Shower?
Iimvula zamanzi zilula ukujonga ngaphezu kwezinye izinto ezininzi zeenkwenkwezi okanye iziganeko. Yonke into oyifunayo yindawo ebumnyama kunye nesihlalo okanye ingqayi. Njalo qinisekisa ukuba unesigqeba esilungileyo, nokuba uhlala kwindawo epholileyo yemozulu. Ukujonga emva kwexesha ebusuku kwaye kusasa kusenokukubonisa kwezinye iindawo ezifudumeleyo. Kungenokuba luncedo ukuba nekhadi yenkwenkwezi kukunceda ufumane iPerseus , kunye nezinye iinqununu ngelixa ulindile, kodwa akusikho imfuneko.
Izaziso zisebenza ukusuka phakathi koJulayi ngamnye ngonyaka xa uMhlaba ungena kwimida yangaphandle yoMlambo we-Swift-Tuttle. Ixesha elifanelekileyo lokubukela lihluka kodwa lihlala liphakathi kwe-2: 00 no-4: 00 nge-12 ka-Agasti. Iimitha zokuqala zephondo ukusuka kwi-9 ukuya kweyesi-14 uze uthabathe emva koko. Ngo-Agasti 2017, ixesha elifanelekileyo lokubukela lisemva kweentsuku zobusuku ngokusa kwe-Agasti 12.
Kuza kubakho ukuphazamiseka kwiNyanga, eyokuphela. Kodwa, ufanele ukwazi ukubona ezikhanyayo. Kwakhona, qalisa ubukele ubusuku obuthile ngaphambi kwaye uqhubeke nobusuku obusemva; I-Perseids iqhubeka malunga neveki ezintathu.
Fumana indawo efanelekileyo yokubukela apho unokufumana umbono ocacileyo wezulu. Fika kusasa ukusetha, kwaye uzinike ixesha lokutshintsha amehlo akho ebumnyameni. Emva koko, hlala (okanye ulale), phumula, kwaye ujabulele umboniso. Uninzi lwama-meteors luya kubonakala lukhanye kwi-constellation yasePerseus, kunye ne-streak kwi-sky. Njengoko ukhangele, qaphela imibala yabalindi njengoko ihamba ngezulu. Ukuba ubona ama-bolide (i-streaks ekhulu), phawula ukuba kuthatha ixesha elide ukuthatha i-sky kwaye uqaphele imibala yazo, nayo. I-Perseids ingaba ngamava amnandi kakhulu kumntu-ukusuka kubantwana abancinci ukuya kwiinkwenkwezi zeenkwenkwezi.
Ilungiswe kwaye yandiswa nguCarolyn Collins Petersen.
Yintoni kwi-Space Between Stars?
AmaGrike, iiNtsomi kunye neNtsomi
Ngaba uNancy Pelosi Ulahlekile iRbebe Rack ka-1955?
Imithetho ephezulu ye-spelling (ngaphandle kweeNgaphandle)
Zonke iinkcukacha kwiNgxelo yokuPhakanyiswa kwePostile kwiNzondo
UChristie Clark Uxoxwe
20 Phinda ubuyekelele i-Movie Trailers Okufuneka Uyibone
Abadumileyo abathetha iSpanish njengoLwimi lwesiBini